टीकापुर घटना : के भन्छन् रिहा हुनेहरु ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > टीकापुर घटना : के भन्छन् रिहा हुनेहरु ?
बर्दिया स्कुलमा अध्यापन गर्दागर्दै समातिनु भएका रामनरेश चौधरी अदालतले आफूलाई निर्दोष बताए पनि ढिलो गरी आफूले न्याय पाएको बताउनुहुन्छ । ‘ढिलो गरी न्याय पाउनु भनेको अन्याय सरह नै हो ।’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘यदि यही न्याय मैले तीन वर्षअघि पाएको भए, धेरै खुशी हुने थिएँ ।’ उहाँ अदालतले आफूलाई न्याय गरेको भए पनि अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । अहिले पनि धेरै निर्दोष साथीहरु जेलमा रहेकोले उनीहरुलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अस्मिताले किन गरिन् देह त्याग ? दिउसो प्रेमीसँग डेटिङ गएको साथीहरुले बताए
३ वर्षपछि निर्मला हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्ति को हुन् ?